सार्वजनिक सवारी कहिले सन्चालनमा आउछन त ? यस्तो छ महासंघको तयारी – – Life Nepali
सार्वजनिक सवारी कहिले सन्चालनमा आउछन त ? यस्तो छ महासंघको तयारी –
काठमाडौँ, २८ असार । सार्वजनिक सवारी सञ्‍चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात सम्बन्ध मजदुर संगठनहरुले कार्यदल गठन गरेका छन् । महासंघ र तीनवटा मजदुर संगठनको शनिबार ललितपुरमा बसेको संयुक्त बैठकले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, नेपाल यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका कार्यवहाक अध्यक्ष दिपक केसी छन् ।
कार्यदलले लामो तथा छोटो दुरीमा चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधनहरु सुरक्षित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्ने बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । व्यवसायी र मजदुर संगठनले यथास्थितिमा सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न नसिकने भन्दै उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारसमक्ष अनुरोधसमेत दोहोर्‍याएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
२३ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पुर्‍याइ काठमाडौं उपत्यकाकाभित्र र बाहिरका जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, शुक्रबार महासंघले आफ्ना सर्त सरकारले पूरा नगरेको भन्दै तत्काल यातायातका साधन नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
Previous बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनका बाउ छोरालाई कोरोना पोजेटिभ, अस्पताल भर्ना”
Next बूढीगङ्गा नदीमा पानीको सतह बढेर पुल माथिबाट बग्न था’ल्यो” अछामको साँफे-बूढाबगरलगायत ठाउहरु जोखिम